Frantsa: Birao Famoahana Gazety Mpandrabiraby Nodorana Taorian’ny Nanarabiany ny Sharia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2012 7:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, polski, 日本語, English
Amin'ny teny frantsay avokoa ny rohy rehetra ato raha tsy hoe misy filazana hafa omena]
Nandritry ny alin'ny 2 Novambra 2011 dia nisy nanafika tamin'ny alalan'ny solika napoaka [en] ny birao foiben'ny orinasa mpamoaka gazety mpandrabiraby mivoaka isan-kerinandro antsoina hoe Charlie Hebdo ao Paris ka may ravan'ny afo. Namoaka gazety fandrabirabiana mitondra ny lohateny hoe ‘Sharia Weekly’, na “Sharia Isan-kerinandro” mitantara ny zava-mitranga ankehitriny ao Tonizia sy Libya aminà andro iray mitovy ilay gazety Frantsay mpiseho isan-kerinandro efa zokiny indrindra sy mpandranitra. Io tantara io dia manasongadina ilay Mpaminany Silamo antsoina hoe Muhammed ho toy ny ‘mpamoaka lahatsoratra nantsoina hivahiny’, miaraka amin'ity lohatenin-dahatsoratra ity manao hoe: “Sharia Isan-kerinandro: kapoka karavasy in -100 raha tsy matin'ny fihomehezana ianao”.
"Ary ankehitriny, eo alohan'i Gresy, dia mila manavotra an'i Charlie" aho- nalaina tao fonon'ilay gazety Frantsay 'Libération', nataon'ilay mpanao sariitatry ny Charlie Hebdo – tamin'ny 3 Novambra 2011.
Ny andro faharoa taorian'io haintrano io raha tsy mbola nahazoana valiny ny fikarohana nataon'ny polisy dia nirehitra ihany koa ny media sy fanaovan-gazety frantsay, ny sehatra politika ary ireo tambajotra sosialy. Tsy nahitàna ireo boky nivoaka farany avokoa ireo mpivaro-boky rehetra. Tao amin'ny Twitter, ny tenifototra #charliehebdo no lohahevitra frantsay be mpiresaka indrindra raha vao nivoaka ny vaovao omaly maraina. Ireo mpikambana sasany ao amin'ny Twitter dia nisafidy ilay pejy voalohany maha-be resaka ho toy ny sary fanehoana ny aminy tao amin'ny Twitter . Ankehitriny dia miasa isan'andro ao amin'ny biraon'ny gazety Frantsay mpiseho isanandro Libération ny Charlie Hebdo, ary namorona ny pejy voalohan'ny gazetiny eo ambany fanaraha-maso hentitra.
Notafihan'ny vondrona Tiorka “Akincilar” ihany koa ny vohikala Charlie Hebdo nandritry ny alina nitrangan'ilay fandorana, raha araka ny nambaran'i Le Nouvel Obs (jereo ny hafatra fohy tamin'io mpiseho isan-kerinandro io, amin'ny teny anglisy). Namoaka sarin’ ilay vohikala voahosihosy i Tech Korben, mpitoraka blaogy:
Vohikala Charlie Hebdo voahosihosy
Tsy ity no fanaborosiana voalohany nataon'i Charlie Hebdo raha eo amin'ny resaka fandrabirabiana mikasika ny Silamo. Tamin'ny taona 2007, nenjehan'ny lehiben'ny mpitondra fivavahana ao amin'ny moske ao Paris io gazety io noho ny fonony nisy sarin'ilay mpaminany Muhammad narahana fanamarihana hoe ‘Sarotra ny maka ny fon'ny adala‘ ary koa noho ny famoahana indray ilay sariitatra Danoà mpandrabiraby [en] ho fanehoana ny firaisankina eo amin'ny samy famoahana gazety. Nandresy ny famoahana tamin'io. Omaly, nanameloka ny fanafihana sy ny fanaovana io sary io ny lehiben'ny mpitondra fivavahana ao amin'ny moske ao Paris.
Mbola tafiditra eo anelanelan'ny ady ho an'ny fahalalahana mamoaka hevitra amin'ny alalan'ny fanakianana (sy miteny) ary ny fanajana ny fivavahana, izay anaty vanim-potoana somary saropady hatrany, i Frantsa laika : nandritry ny fotoana mialoha ny fifidianana filoham-pirenena frantsay amin'ny taona 2012.
Niteraka fanehoan-kevitra maro io vaovao io tao Frantsa. Maro ireo nihevitra fa io fanafihana io dia fanosihosena tsy hay leferina ny fahalàlahana maneho hevitra.
Nanameloka io fanafihana io i Hacen BOUKHELIFA, mpahay lalàna ao Marseille, Frantsa :
Tsy misy na inona na inona afaka manazava ny hetraketraka ataon'ireo mahery fihetsika ireo izay toa tsy manaiky ny fahalàlahana miteny, indrindra indrindra moa raha avy any anatin'ireny gazety mpanakiana mivoaka isan-kerinandro ireny
Hoy i Capiaux Alain manohy izany:
Mendrika ny hahazo ny fanohanan'ny tsirairay izay miaro ny fahalàlahana miteny ny Charlie Hebdo. Zon'ny tsirairay avy ny manakiana ny Silamo.
Fa araky ny hevitry ny hafa kosa, toa an'i Sidi_la, endrika roa samihafa amin'ny fahalàlahana miteny no ampiharina ao Frantsa. I Dieudonné Mballa no resahana amin'izany, ilay mpanao vazivazy Frantsay iray izay nosamborina sy nomelohana noho izy lazaina fa manohitra ny fomba fijerin'ny Jiosy sy ny Arabo, manoratra izy hoe:
Omana alàlana miteny ny Silamo, fa raha i Dieudo no mandray fitenenana dia tsy maintsy mizaka ny vokany izy! = Frantsa
Maneho ny fanoherany ny Katolika amin'ny alalan'ny peta-drindrina ao Paris "Ndao isika hiaro an'i Jesoa Kristy!" – nataon'i @egoflux nalaina tao amin'ny Twitter
Tristan (@egoflux), sy ireo mpankasitraka ny sekta, dia mampahatsiahy fa ilay hetsika nokarakarain'ny mpino katolika Frantsay dia manakorontana ilay seho an-tsehatra tao Paris izay nahitana ny endrik'i Jesoa nosimbàna tanteraka. Apetany eraky ny rindrina ao Paris io sary maneho ny fanoheran'izy ireo io :
Tofoka tanteraka i Xavier (@dascritch):
Leo an'ireo mpiaro ny finoany ireo aho. Ny Katolika, ny Jiosy ary ny Silamo, ianareo dia endriky ny tsy fahalàlana, ny fankahalàna sy ny fahafatesana fotsiny ihany.
Fanampiana tosika ny hery farany havanana
Nampamelona ny fanantenan'ny mpanao politika eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena taona 2012 ny firohotana hanohana ny Charlie Hebdo. I Severin dia mahita fa hanome vahana an'i Marine Le Pen mpirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena avy ao amin'ny hery farany havanana fotsiny ihany io trangan-javatra io :
#charliehebdo mirehitra, Marine le Pen mahazo isa telo tamin'ny futspan-kevitra farany teo. Famantarana ny orinasa iray tsy manara-dalàna. #tsy mandray andraikitra
"Charlie (Hebdo) manampy tosika ny hery farany havanana"- nataon'i @elpasolibre nalaina tao amin'ny Twitter
Korontana ao amin'ny Facebook
Tototra hafatra ny takelaka Facebookin’ i Charlie Hebo.
Hoy i Mehri Yassine avy any Tonizia:
Sahy milaza aho fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy i Allah ary manambara ihany koa aho fa i Muhammad dia Irak'i Allah
Hoy i Virgile Gaillard an-katezerana:
Misaotra anao ry Charlie ! 🙁 Noho ianao dia lasa tsy nisy nifantoka tamin’ ny vokatra ateraky ny krizy ny rehetra… misy mandraraka lasantsy eo amin'ny fankahalana ny hafa efa nisy hatramin'izay, misy ihany koa ireo manameloka ny Silamo, satria maro no mitady ho voasariky ny ‘fondamentaliste’ tsy hita hoe ahoana = ny Silamo
Nametraka hafatra fanohanana tamin'ny teny anglisy i Erick Oster Saerkjaer, avy any Denmark, toerana izay nitrangan'ny resabe voalohany mikasika ilay “sariitatr'i Muhammad” nivoaka tamin'ny taona 2005:
Ny vazivazy no fomba ametrahana fanontaniana manan-danja amin'ireo izay mihevitra fa izy ireo ihany no nahita sy manana ny valiny marina. Rehefa tsy manao izany isika dia ny havendranana no handresy.
Ankehitriny dia nangataka tamin'ny Facebook i Charlie Hebdo mba hanakatona ny takelakany, satria maro amin'ireo hafatra ireo no mandika ny lalàna frantsay dia ny famporisihana ny fifankahalàna ateraky ny fahasamihafan'ny fiaviana sy foko ary ny finoana. Nizara ny alahelony tamin'ny mpandrindra io vondrom-piarahamonina tao amin'ny takelaka Facebook io ireo mpiondana aterineto tao amin'ny Twitter; maminavina ny karazana toerana banga mety handefasan'ny Charlie Hebdo fampilazàna i Lauren Provost:
Mitady mpandrindra vondrom-piarahamonina i Charlie Hebdo. Fepetra ilaina amin'izany: fitantanana ny olana ary fahafehezana ny teny Arabo
Namoaka fomba fijery roa mikasika io krizy misy eo amin'ny Charlie Hebdo io ny “Index on censorship”, ahitana ampahany amin'ny hevitry ny mpianatra roa avy amin'ny anjerimanontolon'i Etazonia sy ny Royaume-Uni.
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia niarahan'i Julie Owono sy Claire Ulrich nanoratra.